विरामी मृत्यु प्रकरण : डाक्टरकै लापरवाही हो त ? – Rajdhani Daily
विरामी मृत्यु प्रकरण : डाक्टरकै लापरवाही हो त ?
काठमाडौं । चिकित्सकका लापारवाहीका कारण विरामीको अकाल मृत्यु हुनेक्रम बढेको गएको पाइएको छ । जसका कारण अस्पताल तोडफोडसमेत हुने गरेका छन् । विरामी मृत्युको कारण डाक्टरको लापारवाहीपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै आफन्तले चिकित्सक तथा अस्पताललाई समेत आक्रमणको तारो बनाउने गरेका छन् । पछिल्लो १५ दिन काठमाडौंस्थित ओम अस्पताल, डडेलधुरा जिल्ला अस्पतालमा तोडफोड भएको थियो ।
त्यस्तै, काठमाडौंस्थित समता अस्पतालमा मंगलबार तोडफोड प्रयास भएको छ । प्रहरी समयमै पुगेकाले अस्पताल क्षति हुनबाट जोगियो ।
अस्पतालकै शैøयमा उपचारक्रममा विरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तको टार्गेट अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा पर्ने गरेको छ । अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा विरामीमाथि ‘डाक्टरले लापरबाही गरेको’ भन्दै आफन्तले अस्पताल भवन र पूर्वाधारमा रिस पोख्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो दुई साताभित्र तीन अस्पतालमा तीन जनाको ज्यान गयो । त्यसपछि उनीहरूले अस्पताल ‘ज्यान मार्ने थलो भएको’ भन्दै नाराबाजीसहित भौतिक आक्रमण गरे । केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लियो ।
कीर्तिपुरका २९ वर्षीय अमृत केसी उपचारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगे । उनलाई पेट दुख्ने समस्या थियो । ‘डाक्टर भएको ठाउँमा पुग्नै समय कुर्नुपर्ने, डाक्टर भेटेपछि पनि त्यति धेरै वास्ता नगरेको महसुस भयो,’ उनी भन्छन्, ‘डाक्टरले बिरामीलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ, सोधेका कुरा झर्को नमानेर भनिदिनुपर्छ ।’
– आफन्तको टार्गेट अस्पताल गेट र सिसा
– पाँच डाक्टर निलम्वन
– विरामीमाथि वेवास्ता
– डाक्टर हतोत्साहित
यसैगरी, अमरगढी नगरपालिका–६ धर्मराज ताम्राकारकी २६ वर्षीया पत्नी गीताको सुत्केरी भएको १४ दिनमा रक्तस्राव नरोकिएपछि डडेलधुरा अस्पताल ल्याइएयो । उपचारक्रममा उनको मृत्यु हुन पुग्यो । उनको मृत्युपछि आफन्त आन्दोलनमा उत्रिए । तनाव उत्पन्नपछि उपचार सेवा रोकेका चिकित्सकले सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र ‘ओपिडी’ सेवा सुरु गरे ।
सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती–१० की ५० वर्षीया रामप्यारी थापाको ओम अस्पताल सघन उपचार कक्षमा उपचारक्रममा गत बिहीबार मृत्यु भयो । पत्थरी शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकले रामप्यारीको पेटको आन्द्रा काटिएको र आन्द्रा नटाली अप्रेसन गरेको घाउँमा टाका लगाउँदा इन्फेक्सनका कारण निधन भएको भन्दै आफन्तले अस्पतालमा नाराबाजी गरे ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन नयाँ व्यवस्थामा डाक्टरको लापरबाहीका कारण उपचारक्रममा बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भए पा“च वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना प्रावधान छ ।
त्यस्तै, हेलचक्य्राइ“क्रममा मृत्यु वा अंगभंग भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पाँच डाक्टरलाई निलम्बन गरेको छ । काउन्सिल सदस्य डा. ढुण्डीराज पौडेलले उपचारक्रममा डाक्टरको लापरबाही देखिएको आशंका भए काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने बताए ।
‘उजुरी दिएपछि प्रक्रियामा जान्छ, डाक्टर वा अस्पताल दोषी देखिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्छ तर के गर्नु अस्पतालमा तोडफोड हुन्छ अनि आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिल्छ,’ उनले भने, ‘ऐनसमेत एकीकृत नहुँदा समस्या भएको छ, प्रभावकारी संयन्त्र विकास हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’
नेपाल चिकीत्सक संघ अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले डाक्टरको गल्ती भए छानबिन गर्न सकिने भन्दै अस्पतालमा तोडफोड गर्नु ‘राम्रो बाटो नभएको’ प्रतिक्रिया दिए ।
‘डाक्टरको गल्ती भए कारबाही हुनुपर्छ, राजनीतिक आडमा पनि उच्शृंखल गतिविधि भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, भएका कानुन कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ ।’
सरकारी चिकीत्सक संघ अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले डाक्टरमाथि दुव्र्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले हतोत्साहित भएको भन्दै यस्तै अवस्था रहे जटिल केस उपचार गर्नै छाड्नसक्ने सम्भावना औंल्याए ।
‘अस्पतालमा पनि बिरामीको मृत्यु हुन्छ, मान्छे अमर कहिल्यै हुँदैन, लापरबाही हुनसक्छ तर कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुप¥यो नि †’ उनले भने, ‘दोष प्रमाणित भए डाक्टरलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।’
काठमाडौं । काठमाडौंको बसन्तपुरमा एक जना मजदुरको गएराति हत्या भएको छ । काठमाडौं –१९, दमाई टोल बस्ने ४५ वर्षका अरुण चित्रकारको छुरा प्रहार गरी हत्या भएको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त, जनसेवाको टोलीले हत्य...
मेडिकल कलेज विद्यार्थी ठगी प्रकरण : सीडीओलाई पत्र… (543)